by अनन्त | 2017-06-09 00:24:32| Tags : social | mainNews |
धान्ला पोखराले ? पोखरामा यसकारण चाहिँदैन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
यतिबेला पोखरेली जनता उत्साहित छन्, आफ्नो आँगनमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने काम अघि बढिरहेको छ । म चाहिँ यो विमानस्थल बन्नुहुँदैन भन्दै आएको छु । यसो भन्दा विकास विरोधी सुनिएला । तर, कुरा त्यसो होइन । वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराको निम्ति अत्यन्तै प्रत्युत्पादक छ ।
पोखरालाई यसकै मौलिकतामा राख्ने हो र जीवन्त राख्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनै हुँदैन ।
सबै साथीहरुले भने, विमानस्थल बन्ने बित्तिकै पोखराको चकाचौध हुन्छ । मेरो विचारमा त्यस्तो चकाचौध हुँदैन । यसो भन्नुमा मेरा तीन-चार वटा आधार छन् ।
पहिलो आधार हो, अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनको नियमन गर्ने ‘आईकाओ’ को प्रावधान । आईकाओले निर्दिष्ट गरेका १८/१९ वटा प्रावधानमध्ये कुनैलाई पनि पोखराले भेट्दैन ।
हामी पोखरामा डाँडा र पहाडहरुसँग यति नजिक छौं, जहाजको निरन्तर आवाजले सुन्दर र शान्त नगरी पोखरामा कोलाहल फैलिन्छ
काठमाडौं-पोखरा चार लेनको सडक बन्यो भने साढे एक घण्टाको ड्राइभमै आउजाउ गर्न सकिन्छ । नागढुंगा-नौबिसेमा सुरुङ मार्ग बनेपछि यात्रा अझ सहज हुनेछ । यो स्थितिमा काठमाडौंको एयरपोर्ट हाम्रो पनि हुनेछ
त्यहाँ तारे होटलदेखि साना होटलसम्म हुन्छन्, त्यही वर्गका रेष्टुरेन्टहरू हुन्छन् । जहाँ रात-बिरात मान्छे छोड्न जाने, लिन आउने र जहाजका क्रु मेम्बरहरु त्यहाँ बास बस्न र आराम गर्न सकून् । त्यहाँ सामान तुरुन्तै लोड-अनलोड गर्ने गोदामहरु पनि हुन्छन् ।
बाराको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको डिजाइन हेर्दा त्यहाँ ‘एयरपोर्ट सिटी’ को व्यवस्था देखिन्छ । तर, पोखरामा त त्यस्तो अवधारणा नै छैन ।
संसारभरि सय माइलको दूरीमा एयरपोर्ट हुन्छन् । हामीलाई चाहिँ आँगनमै एयरपोर्ट चाहिएको छ ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन उपयुक्त हुँदैन भनेर दिल्लीको एयरपोर्टको उदाहरण हेर्दा हामीलाई पर्याप्त हुनेछ ।
पोखरालाई बचाउने हो भने हामीले पोखराको मौलिकतालाई बचाउने हो । पोखराको विकास पर्यटकीय शहरकै रुपमा गर्ने हो । किनकि यहाँको विशेषता र सम्भावना पर्यटन हो । यो ठाउँ मानव बस्तीले ढाकिने शहर होइन
म साथीहरुलाई भन्ने गर्थेँ, ‘अहिले तिमीहरु इन्टरनेशनल एयरपोर्ट चाहियो भन्दै अनशन बसेका छौं, भोलि तिमीहरुका नाति-नातिना यो एयरपोर्ट उठाऊ भनेर अनशन बस्नेछन् ।’
राजीवले त्यसो भन्दा बंगालीहरुको मन दुख्यो । त्यो भनाइको धेरै विरोध भयो । तर, केही बंगाली विद्वानले भने, ‘राजीवले ठीकै त भनेका हुन् । हामी आफैं कलकत्तालाई मार्ने अनि बाहिरको मान्छे आएर मर्‍यो भन्दा चित्त दुखाउने ? मारेको त हामीले नै हो नि !’
प्रान्तीय राजधानी बन्ने कुरामा काठमाडौंमा केन्द्रीय सरकारको जे-जे संरचना छन्, अब प्रान्तीय सरकार भएपछि रक्षा मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय त यहाँ हुन्छ । मन्त्रालय, सचिवालय र विभागहरु हुने भए । अहिले राजधानीले ती संरचना धान्न जति जमिन ओगटेको छ, धेरथोर त्यति नै जमिन यहाँ पनि चाहियो । कहाँ छ पोखरामा जमिन ? अहिले एक रोपनी जमिन खोज्दा पनि नपाउने अवस्था छ ।
प्रान्तीय राजधानीकै कुरा गर्दा हामीले पालुङटारमा प्रान्तीय राजधानी राख्दिए के बिग्रिन्छ ? किन भिड थुपार्नु छ यहाँ ?
हामी पोखरालाई ५० हजार वा एक लाखको आवादी रहने शहर बनाऔं र आठ-दस लाख मान्छेको मोबिलिटी बढाऔं । दिनमा घुमफिर र रमाइलो गर्न २० हजार मान्छे आउँछन्, २० हजार मान्छे जान्छन् । यहाँका एक लाख मान्छेको घर-घरमा, दैला-दैलामा, कन्तुर-कन्तुरमा पैसा दिन्छन् । सबै मान्छे सम्पन्न र खुसी हुन्छन् । पूर्वाधार विकासको नाममा थेग्न नसक्ने गरी किन भोलि कंगाल र भिखारीको शहर बनाउने ?
पोखरालाई व्यवस्थित गर्न र बचाउन हामीले पोखरा डेभलपमेन्ट अथोरिटी भनेर ऐन नै बनाएर अघि बढ्न सक्छौं । विशेष बडीलाई नै जिम्मा दियो भने केही होला । त्यसको लागि ढिलो भइसकेको छ
पोखरालाई व्यवस्थित गर्न र बचाउन हामीले पोखरा डेभलपमेन्ट अथोरिटी भनेर ऐन नै बनाएर अघि बढ्न सक्छौं । विशेष बडीलाई नै जिम्मा दियो भने केही होला । त्यसको लागि ढिलो भइसकेको छ ।
२०७३ माघ २४ गते १९:४५ मा अनलाईन खबरमा प्रकाशित (२०७४ जेष्ठ २६ गते ९:३० मा पूर्ण प्रसारित गरिएको)